LEI-U | स्मार्ट ढोका लक निर्माता
उच्च संवेदनशीलता फिंगरप्रिन्ट पाठक
LEIU स्मार्ट ढोका फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, यसको आफ्नै अर्धचालक संग, सधैं उच्च परिशुद्धता र उच्च गति मान्यता को लागी तयार छ।
पास मोड को लागी समय
आफ्नो स्मार्ट लक मा नियन्त्रण राख्नुहोस् र आफ्नो स्मार्टफोन मा कुनै पनि समय स्थिति जाँच गर्नुहोस्। तपाइँको साथीहरु र प्रियजनहरु को लागी पहुँच अनुमति प्रबन्ध गर्नुहोस्।
कुनै चोरी पासवर्ड ब्लुटुथ को लागी धन्यवाद
ब्लुटुथ को माध्यम बाट पहुँच तपाइँको पासवर्ड को कुनै पनी अपरिचितहरु को लुकेका क्यामेराहरु लाई उजागर हुने सम्भावना हटाउँछ।
बुद्धि तपाइँलाई सोच्नु भन्दा धेरै सुविधाजनक छ
स्वचालित एक बटन, बच्चाहरु र बुजुर्गहरु को लागी सुविधाजनक।सुरक्षा र विश्वसनीयता हरेक प्रकार्य र विवरण को डिजाइन मा शामिल गरीएको छ।
LEI-U LVD-06 स्मार्ट लक अमेजन एलेक्सा, गूगल घर, IFTTT संग मिल्दो छ। 1 स्मार्ट लक, फिंगर प्रिन्ट, पास कोड, आरएफआईडी कार्ड, आपतकालीन कुञ्जी, मोबाइल आवेदन मा5प्रमुख कम प्रविष्टि विधि जोड्दछ। अत्यधिक सटीक फिंगरप्रिन्ट पहिचान, ०.३ सेकेन्ड भित्र ढोका अनलक, र १२० अद्वितीय फिंगरप्रिन्ट सम्म भण्डार।
डिस्कवरी Lei- यू तपाइँको लागी
Leiyu लन्च "स्मार्ट अपार्टमेन्ट योजना" घर को सजिलो व्यवस्थापन, बिल को ब्यबस्था, हल होटल/ अपार्टमेन्ट/ घर बस्ने र धेरै जीवन व्यवस्थापन समस्याहरु, पनि भाडामा घर, भाडाको अपार्टमेन्ट, होटल व्यवस्थापन, कम्पनी कार्यालय संग अनुकूलित समाधान प्रदान हासिल।
LEI-U स्मार्ट लक र बजार मा अन्य ताला बीच के फरक छ?
नयाँ शैली राउन्ड आकार लक, मानव हथेली को लागी फिट हुन्छ, ह्यान्डल गर्न को लागी सजिलो र सबै टेक्नोलोजी कार्यहरु लाई जोड्नुहोस्।
हामी नयाँ शिल्प उस्तै फोन फोन anodised aluminium को रूप मा प्रयोग। कुनै छीलने, कुनै जंग लाग्ने, कुनै भारी धातुहरु, कुनै formaldehyde र अन्य हानिकारक पदार्थ, फैंसी रंग संग चिकनी सतह, सुरक्षित र स्वस्थ। औंला स्क्यानर, यसको आफ्नै अर्धचालक संग, सधैं उच्च परिशुद्धता र उच्च गति मान्यता को लागी तयार छ। मान्यता गति 0.3s तल रहन को लागी डिजाइन गरीएको छ, र अस्वीकृति दर 0.1% भन्दा कम।
के हुन्छ यदि ढोका स्मार्ट लक संग खोल्न सकिदैन?
जब ढोका फिंगरप्रिन्ट पहुँच द्वारा खोल्न सकिदैन, कृपया जाँच गर्नुहोस् कि यो निम्न कारणहरु को कारणले गर्दा हो: Misoperation १: कृपया धुरी पुष्टि गर्नुहोस् यदि घुसाउनुहोस् र सही दिशा ("S") मा घुम्नुहोस्। Misoperation २: कृपया बाहिरी ह्यान्डल संग जाँच गर्नुहोस् यदि तार बाहिर उजागर भएको थियो र प्वाल मा टाढा राखिएको छैन।
*कृपया उपयोगकर्ता पुस्तिका वा vedio स्मार्ट लक स्थापना गर्न को लागी, कल्पना द्वारा स्थापित नगर्नुहोस्।
के हुन्छ यदि स्मार्ट लक को ब्याट्रीहरु फ्लैट जान्छन्?
LEI-U स्मार्ट लक चार मानक AA ब्याट्री संग काम गर्दछ। ब्याट्री चार्ज स्तर १०%भन्दा तल झर्ने बित्तिकै, LEI-U स्मार्ट लक तपाइँलाई शीघ्र स्वर द्वारा सूचित गर्दछ र तपाइँ ब्याट्रीहरु लाई परिवर्तन गर्न को लागी पर्याप्त समय छ। यसबाहेक, LEI-U नयाँ संस्करण USB आपतकालीन पावर पोर्ट जोड्नुहोस् र तपाइँ लक/अनलक गर्न को लागी तपाइँको कुञ्जी को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। औसत ब्याट्री जीवन १२ महिना को आसपास छ। तपाइँको स्मार्ट लक को बिजुली खपत लक/अनलक कार्यहरु को आवृत्ति र लक को actuation को सहज मा निर्भर गर्दछ। तपाइँ यहाँ ब्याट्री को बारे मा अधिक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।
LEIU आफ्नो उत्पादन पठाउनुहोस्
अनलाइन वा फोन मा, हामी तपाइँको उत्पादन को लागी LEIU मर्मत विभाग को लागी ढुवानी को व्यवस्था गर्नेछौं - तपाइँको तालिका मा सबै। यो सेवा धेरै LEIU उत्पादनहरु को लागी उपलब्ध छ।
के म टाढा बाट अनुप्रयोग को उपयोग गरेर ढोका अनलक गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, बस गेटवे संग जोड्नुहोस्।
LEI-U स्मार्ट Leiyu बुद्धिमान को नयाँ ब्रान्ड लाइन हो र यो 2006 मा स्थापित भएको थियो, नम्बर 8 लेमन रोड, Ouhai आर्थिक विकास जोन, वानजाउ शहर, Zhejiang China.Teishun मा Leiyu उत्पादन आधार मा स्थित छ जो पेशेवर ताला निर्माता हो, उत्पादन संयन्त्र लगभग १२,२४ square वर्ग मीटर, १५० कर्मचारीहरु को आसपास को क्षेत्र कभर गर्दछ। बुद्धिमान लक, मेकानिकल लक, ढोका र विन्डो हार्डवेयर सामान सहित मुख्य उत्पादन।
२०१३ देखि। Vanke संग LEI-U सहयोग र Vanke को एक स्तर आपूर्तिकर्ता भयो, Vanke समूह तालाहरु को ,000००,००० सेट हरेक बर्ष आपूर्ति, र निर्माण दीर्घकालीन सम्बन्ध।
LEI-U ले ५०० भन्दा बढी लक उद्योग साथीहरु को लागी ODM सेवाहरु प्रदान गर्दछ, दुनिया भर मा मुख्यधारा लक निर्माताहरु को अधिकांश कभर।
LEI-U स्मार्ट अपार्टमेन्ट कार्यक्रम
घर को सजिलो व्यवस्थापन, बिल को निपटान, हल होटल / अपार्टमेन्ट / घर बस्ने र धेरै जीवन व्यवस्थापन समस्याहरु को प्राप्त